Cali Guudlaawe” oo Beeniyay Warar Been Abuur ah oo laga faafiyay, | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Cali Guudlaawe” oo Beeniyay Warar Been Abuur ah oo laga faafiyay,
Cali Guudlaawe” oo Beeniyay Warar Been Abuur ah oo laga faafiyay,
Cali Guudlaawe ayaa sheegay in warkaas uu yahay mid been abuur ah, oo la doonayo in fidno qabiil lagu kiciyo, isla markaana ay jiraan qolo dooneyso inay abuurto qalalaase iyo fowd0.
“Warkaas waa been abuur, qolo rabta in fowdo iyo qalalaase ku kiciso ayaa ka dambeysa, magaalada Jowhar waa Caasimadii Hirshabeelle, waa magaalo Soomaaliyeed, muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ayaa ku noolaan kara”ayuu yiri Cali Guudlaawe.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in warkaas ay abuureen shaqsiyaad dano gaar ah leh, isla markaana raba inay iska horkeenaan shacabka reer Hirshabeelle, isagoo tilmaamay in idaacadihii warkaas sii daayay in laga rabo inay keenaan cadeyn.
Magaalada Jowhar ayaa waxaa ka jira xiisado siyaasadeed oo u dhaxeysa Maamulka Hirshabeelle, kaddib markii Xildhibaanada ay xilka ka qaadeen Madaxweynihii maamulka Cali C/llaahi Cosoble, iyadoo Cali Cosoble uu sharci darro ku tilmaamay xil ka qaadistaas.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wali ka hadlin xiisada siyaasadeed ee ka dhex taagan Maamulka Hirshabeelle, inkastoo Madaxweynihii xilka laga qaaday uu dowladda ku eedeeyay inay qeyb ka aheyd ololaha xilka looga qaaday.